Adeegsiga Barnaamijyada-Saddexaad - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta > Adeegsiga Abka-saddexaad
Baro sida loola wadaago macluumaadkaaga caafimaadka si badbaado leh codsiyada-saddexaad.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxaa looga baahan yahay inuu abuuro amni sugan, heerar ku saleysan Isuduwaha Barnaamijka Codsiga Helitaanka Bukaanka (API) taas oo u oggolaanaysa xubnaha inay si fudud ugu helaan macluumaadka caafimaad iyaga oo adeegsanaya barnaamijyada saddexaad ee ay doortaan. Tan waxaa loo yaqaan "wada-shaqeyn."
Boggan, waxaad ku baran doontaa:
Macluumaadkee ayaa ku jira barnaamijka 'CHPW's Patient Access API'
Xuquuqdaada gaarka ah ee HIPAA, iyo cidda ay tahay inuu raaco HIPAA
Sida loo doorto barnaamijyada dhinac saddexaad oo ay u badan tahay inay ilaaliyaan macluumaadkaaga caafimaadka
Sida loo xereeyo cabasho marka macluumaadkaaga caafimaadka la waxyeeleeyay
Sida loogu oggolaado dadka inay wadaagaan macluumaadkaaga caafimaadka
Shuruudaha lagu ogaanayo
API. Hab loo oggolaado codsiyada iyo websaydhada inay wada hadlaan si ay isu dhaafsadaan xaddiga xogta kooban. Macluumaadka lagu daray barnaamijka 'CHPW's Patient Access API' waxaa ka mid ah:
Sheegashooyinka, booqashooyinka xafiiska, iyo isdhexgalka kale ee bixiyeyaasha; iyo
Xogta caafimaad ee la ururiyey inta lagu gudajiray maaraynta kiisaska, iskuduwidda daryeelka, ama adeegyada kale ee CHPW
interoperability waxay ka dhigan tahay inaad dib ula soo bixi karto oo aad ula wadaagi karto macluumaadka caafimaadka dadka aad amartay. Waxaad u adeegsan kartaa abka-saddexaad si aad uhesho macluumaadkaaga caafimaadka si aad sifiican ugufahanto una maamusho daryeelkaaga caafimaad.
App-ka saddexaad. Shirkad ama urur aan xiriir la lahayn CHPW.
Ka baro waxbadan oo kusaabsan wada shaqeynta iyo CHPW's Bukaanka Helitaanka API ee su'aalaheena Q
Xuquuqdaada ku hoos jirta Sharciga La Xisaabtanka iyo La Xisaabtanka Caymiska Caafimaadka (HIPAA) iyo Cida Ay Tahay Inuu Raaco HIPAA
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka (HHS) Xafiiska Xuquuqda Madaniga (OCR) waxay hirgelisaa HIPAA Asturnaanta, Amniga, iyo Xeerarka Ogeysiinta Jebinta, iyo Sharciga Badbaadada Bukaanka iyo Sharciga. HIPAA waxay quseysaa hay'adaha la daboolay (qorshooyinka caafimaadka sida CHPW iyo bixiyeyaasha (dhakhtarka daryeelka aasaasiga ah, xarumaha)).
Ka hel macluumaad dheeraad ah iyo Su'aalaha inta badan la iska weydiiyo ee ku saabsan xuquuqdaada HIPAA halkan ➜
Barnaamijyada dhinac saddexaad ma daboolaa HIPAA?
Sababtoo ah barnaamijyada dhinac saddexaad ma ahan hay'ado la daboolay, sharciyada HIPAA ma khuseeyaan. Taabadalkeed waxay ku hoos dhacaan xukunka Guddiga Ganacsiga ee Federaalka (FTC) iyo Sharciga FTC. Sharciga FTC wuxuu ka ilaaliyaa ficillada khiyaanada ah (tusaale, wuxuu la wadaagayaa macluumaadka shaqsiyeed fasax la'aan).
Raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan asturnaanta barnaamijka moobiilka iyo amniga ➜
Su'aalaha aad isweydiiso naftaada kahor intaadan wadaagin macluumaadkaaga
Markaad dooranayso barnaamij, waa inaad raadisaa siyaasadooda gaarka ah taasi waxay si cad u sharraxaysaa sida abku u isticmaali doono macluumaadkaaga. Haddii siyaasadda asturnaanta aysan si cad uga jawaabin su'aalahan, ka fikir laba jeer isticmaalka barnaamijka.
Su'aalaha la waydiiyo:
Waa maxay xogta caafimaad ee barnaamijkan ururin doono?
Barnaamijkan miyuu ka ururin doonaa xogta aan caafimaadka ahayn aaladdayda, sida goobta aan joogo?
Xogtayda miyaa lagu kaydin doonaa hab ilaaliya aqoonsigayga?
Sidee barnaamijkani u isticmaali doonaa xogtayda?
Barnaamijkan ma u siideyn doonaa xogteyda dhinacyada saddexaad?
Barnaamijkan ma iibin doonaa xogtayda?
Sideen u yareyn karaa adeegsiga barnaamijkan iyo siideynta xogteyda?
Waa maxay tallaabooyinka amniga ee abkan u adeegsado inuu ilaaliyo xogteyda?
Sideen ugu sixi karaa khaladaadka ku jira xogteyda?
Barnaamijkan ma leeyahay nidaam lagu ururiyo oo looga jawaabo cabashooyinka?
Sideen ku joojin karaa marin u helka barnaamijka xogtayda haddaanan mar dambe rabin inaan isticmaalo?
Waa maxay siyaasadda barnaamijka ee tirtirka xogtayda mar haddii aan joojiyo marinka?
Sidee barnaamijkani ugu wargaliyaa dadka isticmaala isbeddelada siyaasadda asturnaanta?
Maxay CHPW sameyn kartaa si loo ilaaliyo macluumaadkaaga caafimaad
CHPW waxay codsaneysaa in barnaamijyada dhinac saddexaad ay caddeeyaan lahaanshaha siyaasad gaar ah oo ay raacaan hababka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo macluumaadkaaga caafimaadka.
Haddii barnaamijka dhinac saddexaad uusan dhammaystirin caddaynta, farriinta digniinta ah ee soo socota ayaa soo muuqan doonta markay ku xirmayso CHPW:
Haddii aad rumeysan tahay in xuquuqdaada ku hoos jirta HIPAA lagu xadgudbay, waxaad dacwad u gudbin kartaa CHPW adoo la xiriiraya waaxdeena Adeegga Macaamiisha 1-800-461-5738 (TTY Relay: Garaac 711), ama adoo buuxinaya a Warbixinta Dhacdada Asturnaanta / Amniga iyo ku soo celinta CHPW.
Waxaad sidoo kale dacwad ka gudbin kartaa OCR iyada oo loo marayo Bogooda Cabashada.
Baro wax badan oo ku saabsan gudbinta cabashada OCR hoosta HIPAA ➜
Haddii aad rumeysan tahay in barnaamijka dhinac saddexaad uu si aan habboonayn u isticmaalay, u kashifay, ama u iibiyey macluumaadkaaga, waxaad u gudbin kartaa cabasho FTC iyadoo la adeegsanayo Kaaliyaha Dacwada ee FTC.
U oggolaanshaha qof inuu marin u helo xogtaada caafimaad
Waad u ogolaan kartaa qof kale inuu helo macluumaadkaaga caafimaadka, sida daryeele ama qaraabo.
Wakiil kasta oo aad u oggolaato inuu ku helo macluumaadkaaga caafimaadka iyada oo loo marayo abka-saddexaad ayaa marin u heli doona oo dhan macluumaadkaaga caafimaadka. Ma awoodi doontid inaad xadiddo helitaanka macluumaadka aadan rabin wadaagista. Tan waxaa ka mid ah daaweynta dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka, caafimaadka maskaxda, xaaladda HIV, ama macluumaad kale oo xasaasi ah.
Si aad ugu oggolaato wakiil inuu ka helo macluumaadkaaga caafimaad barnaamijka saddexaad, waxaad u baahan doontaa inaad dhammaystirto oo aad soo celiso Ruqsad Siideynta Macluumaadka Caafimaadka ee Baakadka Helitaanka Qalabka Elektarooniga ah.
Marka la helo waaxda Adeegga Macaamiisha ee CHPW ayaa duubi doonta oggolaanshahaaga waxayna siin doontaa macluumaadka gelitaanka wakiilka idman.
Kusoo Degso Baakadka sidii PDF ➜
Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa waaxda Adeegyada Macaamiisha ee CHPW 1-800-461-5738 (TTY Relay: Garaac 711) si laguu soo diro Baakad.
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Sebtember 13, 2021